Kukhona amahhotela anjalo eGreece athandwa kakhulu kangangokuba amakamelo okuzo kufanele abhaliswe ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kweholide ehleliwe. Futhi enye yalezi zikhetho i-Malama Beach Holiday Village 4 *.
Le nkimbinkimbi yehhotela yavulwa eminyakeni engaba ngu-25 edlule. Kodwa, naphezu kwalesi sizukulwane, ihhotela lisengumusha futhi lwanamuhla. Phela, kukhona ukulungiswa njalo nokulungiswa njalo. Imisebenzi yokugcina yalolu hlobo yayingu-2014.
Indawo yaseMalama Beach Holiday 4 * iseningizimu-ntshonalanga yeCyprus, edolobheni lasePrataras. Ezikhathini zasendulo, emakhulwini eminyaka ngaphambi kwenkathi yethu, lapha kwakuyidolobha lasendulo laseLefkola. Namuhla i-Protaras yanamuhla iyindawo yokuzijabulisa eyaziwayo, eyaziwa ngamabhishi ayo amahle anesihlabathi. Enye into ethakazelisayo yukuphela kwemizuzu engu-5-7 ukuhamba edolobheni lase-Ayia Napa. Lokhu, njengoba uyazi, futhi kuyindawo yokuzijabulisa ethandwayo. Yilokho nje i-Protaras enamandla kunaye. Ngendlela, kuthatha imizuzu engaba ngu-40 ukufika e-Larnaca International Airport .
Ihotela ngokwayo iseduze nebhishi. Enye eduze yi-aquarium ye-Protaras. Kuzo zonke ezinye izinto ezikhangayo okudingeka uhambe kuzo, kodwa ungafika lapho masinyane. Emakhilomitha angu-10 kukhona i-monastery yase-Ayia Napa, epaki kazwelonke "Kavo Greco", epaki yamanzi "Amanzi Ezwe", emaphandleni olwandle kanye nezinye izindawo eziningi ezithakazelisayo.
Manje ungakhuluma ngalokho okusemkhawulweni waseMalama Beach Holiday 4 *. Kukhona ipaki yemoto yangasese yamahhala ne-Wi-Fi esheshayo, ekwindwendwe ungathola i-ATM, idesksi yokuvakasha, ukushintshaniswa kwemali kanye negumbi lokugcina. Ezinye izivakashi zinikezwa ngezinsizakalo ze-concierge kanye nedeskithophu yokuthola amahora angu-24.
Kusukela eMalama Beach Village Village 4 * kuvame ukuchazwa njengehhotela lokuzilibazisa nezingane, kunabantwana nabafundisi lapho. Kukhona neqembu elincane elinama-TV neziteshi zomncinyane, umculo ofanele, ama-movie, amathangi, amabhuku nemidlalo.
Kukhona nensizakalo yokuhlanza eyomile enezinsiza zokuhlanza kanye nezinsizakalo ezijwayelekile ezifana ne-shuttle service, ukuhanjiswa kwezindaba kanye nama-packed lunch nawe. Ihhotela libuye libe negumbi lesikomfa lesimanje labantu abangu-100 namagumbi amabili omhlangano. Isitolo sokukhumbuza siyatholakala nasayithi.
Kumele kuqashelwe ukuthi ihhotela linokuqashiswa kwemoto. Ihotela lihambisana nenhlangano enkulu ye-Aristo Car Rentals, ehlinzeka izivakashi ngezimoto ngesaphulelo se-10%. Namanje ungakwazi ukuqasha i-scooter noma i-moped (nge-15 euros ngosuku) kanye nebhayisikili (8 €). Amakhamera ayenamacembu onke - kusukela ku-B kuya ku-J.. Imoto ngayinye ifakwe umoya wokumoya umoya. Futhi kuyifiseleka ngenhloso yakho yokuqasha imoto kusengaphambili. Futhi ekukhulumisaneni nabasebenzi, ngendlela, ngeke kube nezinkinga, ngoba ihhotela lisebenza ngabantu abangazi isiGreki nesiNgisi kuphela, kodwa futhi isiRashiya, isiFulentshi nesiJalimane.
E-Malama Beach Holiday Village 4 * (Cyprus) ungaqeda ukuzitholela kwakho ngezindlela eziningi ezahlukene. Kusihlwa imibukiso emihle ibanjwe lapha, futhi ngaphambi kokuba lezo zivakashi ngokuvamile zichithe isikhathi emidlalweni yamanzi. Isibonelo, ukuhamba nge-mask ne-snorkel, ukwenza ukudilika nokupaka, ukuhamba ngemikhumbi noma ukushushuluza kwamanzi. Lapha kukhona konke okubaluleke kakhulu kulokhu.
Futhi abantwana, uma abazali babo behamba nabo, bangahlala ngalesi sikhathi e-mini-club ngaphansi kokuqondiswa kwabafundisi.
Engxenyeni yehhotela ungadlala u-squash, ama-darts, i-table tennis kanye ne-tennis evamile noma kumabhilididi. Kukhona futhi isikhungo sempilo. Kukhona i-jacuzzi, i-sauna, ibhuku lokuTurkey, amakamelo okubhunga kanye nokuzivocavoca. Futhi akude nehhotela kunegalofu yegalofu - lokhu kuyadingeka ukufaka engqondweni. Ngolwandle, usengakwazi ukwenza i-parasailing - okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka kuqinisekisiwe.
Mayelana nokudla okunomsoco
I-Malama Beach Holiday Vilagė inikeza izinhlobo eziningana zokudla. Ungalalisa ibhulakufesi kuphela, ibhodi lesigamu noma konke okubandakanya. Lapha kukhona indawo yokudlela (isebenza kokubili emenyu, nasesimweni se-buffet), imigoqo ngisho ne-buffet yezingane.
Abantu abavakashele leli hotele bathi basondliwe kahle lapha. Indawo yokudlela eyinhloko iLa Piazza inomoya ocolile, futhi kukhona indawo engaphandle ongayidla uma isimo sezulu sivumela. Namanje lapha ukuletha izitsha emafulethini kwimenyu. Futhi kulabo abasanda kushada, le ndawo yokudlela ihlela isidlo sokuthanda ngamabili ngamakhandlela nge-champagne yendawo.
Njalo ebusuku kusihloko sokudlela. Kukhona njalo inhlanzi, izinkukhu kanye nenyama - ngezindlela ezihlukahlukene zokupheka. Futhi phakathi nendawo yokudlela umpheki uyilungiselela isidlo kumakhasimende ngamunye, afunayo. Konke kwenziwa ngokushesha kakhulu, kodwa kuyamnandi - kuthatha imizuzu engama-10, kungasaphinde.
Ngendlela, ku-Cafe Wonke ama-Sweets Corner izivakashi angazama izinhlobonhlobo zama-pancake, ama-waffles, amaqebelengwane namanye amaswidi, kanti i-Café Kalimera inikeza ukudla okudliwayo okumnandi nezikhathi zokuphumula.
Kukhona njalo izithelo ezintsha. Lezi yi-plums, amagilebhisi, amapheya, ama-nectarine, amapreaches, amakhabe, amakhabe nokunye okuningi. Ngokuvamile, izithelo zonyaka. Futhi namanje lapha ulungiselele ama-dessert okumnandi ne-ayisikhilimu. Ngakho akekho ozohlala elambile. Into ekhona engekho lapha idla ukudla phakathi kokudla okuyinhloko, kodwa lokhu kuyisicefe, ongakwazi ukuyilalela.
Izivakashi mayelana nendawo yokudlela
Abantu abaye lapha ekubuyekezweni kwabo akugcini nje ukuchaza ikhwalithi nokudla kokudla. Bathi futhi le ndawo yokudlela ingumpheki omangalisayo nje. Ubani oyopheka noma yini. Amagciwane, izitshalo zemifino kanye ne-dieters angathula ukudla kwabo. Ngaphezu kwalokho, abaningi baqinisekisa ukuthi umpheki uzokhumbula izivakashi kanye nokuthanda kwabo. Into ebaluleke kakhulu ukuhlonipha nokulungisa, bese izicelo zizogcwaliseka.
Manje - ngokuningiliziwe mayelana namafulethi. I-Malama Beach Holiday Village inamakamelo ezinhlobonhlobo. Thatha, isibonelo, i-suite eyenzelwe izivakashi ezimbili. Ikhanyisa, ihlotshiswe ngemibala emihle futhi ifakwe ifenisha yanamuhla, enezindawo ezingama-square square 65. Ngaphakathi kukhona umbhede womabili, i-sofa nendawo yokuhlala endaweni ehlukene yokuhlala. Noma kunjalo, kufanele kuqaphele ukuthi le nkampani ihlukaniswe ngamakamelo amaningana. Kukhona ikhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokuphumula, ikamelo lokulala kanye nebhokisi langasese.
Izinsiza zihlanganisa umsakazo, i-plasma TV, umoya wokushisa umoya nokushisa ukushisa, izakhiwo zensimbi, fan. Kukhona futhi indlu yokugezela.
Izindleko ezijwayelekile zeviki zihlala kule suite ngenxa yama-ruble angu-85,000 (ngebhodi lesigamu). Kumele kucatshangelwe ukuthi amanani awagcini lapha. Baxhomeke esimweni sonyaka kanye nezinye izinto eziningi. Futhi ngezinye izikhathi ziphansi.
Indawo yaseMalama Beach Holiday 4 * (Protaras) ineamakamelo angaphezulu aklanyelwe izivakashi eziningi. Thatha, isibonelo, igumbi elinamakamelo okulala kanye negumbi lokulala elihlukile. Eqinisweni, lawa angama-suites afanayo amabili. Kodwa ngemibhede eminingi. Kulesi simo, igumbi lokuphumula linama-sofas amabili.
Izivakashi ezine ngesonto lokuphumula zizobiza ama-ruble ayizinkulungwane eziyikhulu. Kuvela konke ku-25 t. R. Ngomuntu, okuyisamba esincane kakhulu, enikezwe ukuthi intengo ihlanganisa ibhodi lesigamu.
Kukhona amakamelo kubantu abadala ababili nabantwana ababili (kuze kube ngu-12 ubudala). Lapha isonto lokuhlala liyi-115 amathani.
Uma uthenga amathikithi endizeni, kufanelekile ukukhumbula ukuthi leli hotela liqala ngo-14: 00. Yiqiniso, uma inombolo eyalelwe yi-tourist isuliwe futhi yakwazi ukufakwa, ngakho-ke ngeke kudingeke ulinde isikhathi eside. Kodwa ihhotela liyakuthandwa, ngoba cishe alinalutho. Ngakho kungcono ukhethe indiza elula kakhulu. Futhi ukuhamba kufanele kugcwaliswe ngaphambi kwemini.
Kuleli hotele ngithenga ngokushesha zonke izinkambo. I-Malama Beach Holiday Village ivumela ukuba uhlale nezingane zanoma yikuphi ubudala, futhi ngisho nokubeletha kunikezwa omncane kunazo zonke (kuze kube neminyaka emibili ubudala). Futhi kukhululekile ngokuphelele, njengoba kuphila komntwana.
Lapho ukubhuka, kuzodingeka ucacise imininingwane yekhadi lakho lesikweletu. Ihhotela lamukela izinketho ezinhlanu - Master Master, Visa, kanye ne-Maestro, Diners Club ne-American Express. Ikhadi kuzodingeka lihanjiswe ngesikhathi sokungena kanye nekhadi lesazisi.
Izivakashi zitshela ukuthini?
Abantu abavakashele i-Malama Beach Holiday Village 4 *, izibuyekezo ziningi kakhulu. Futhi okokuqala baqaphela indawo enhle yehhotela. Itholakala entabeni encane, okusho ukuthi amakamelo amaningi anombono we-panoramic olwandle. Kuya ogwini ngokwayo kubalulekile ukwehla, kodwa ngeke kuthathe isikhathi eside. Kukhona ama-sun loungers lapho, kodwa kudingeka badlale kusukela ekuseni kakhulu. Noma kunjalo, ukulala ithawula kulala kahle, ngoba ugu lolwandle lunesihlabathi.
Ngendlela, izivakashi ezahamba kwamanye amabhishi (njengeKonnos Bay, Fig Tree Bay neNissi Beach) zithi ihhotela lihle kakhulu. Futhi zonke lezi zindawo zingafinyelelwa ngebhasi inombolo 102. I-stop eduze kwehhotela, ngemizuzu emihlanu ukuhamba.
Abantu abaningi, beshiya ukuphumula eMalama Beach Holiday Village 4 * ukubuyekezwa, tshela ngabasebenzi behhotela. Bathi ukuhlanza kulungile lapha, izintombi zenza umsebenzi wazo ngokukholwa, zishintsha amathawula abo nsuku zonke. Izambatho zangaphansi zimbozwe entsha emva kwezinsuku ezintathu.
Noma kunjalo kukhona abaqondisi abahle. Benza isiqiniseko sokuthi amakamelo anefriji, isitofu, i-microwave nezinye izesekeli. Ngokuvamile, konke okudingekayo, ukuze umuntu apheke ukudla kwakhe. I-buffet ihle kakhulu lapha, kodwa akubona bonke abantu abakhokhela insizakalo yonke ehlanganisiwe noma ehhafu. Ngaphezu kwalokho, ngakwesokunene nehhotela kunezitolo ezinhle ezinenani elikhangayo kakhulu. Ungathenga khona imikhiqizo ehlukahlukene futhi nsuku zonke zama okuthile okusha.
Futhi-ke, abantu bayakujabulela ukukhuluma ngabasebenzi bezithombe. Ihhotela lisebenzisa amaqembu amabili ama-animators, okunye okukhulunywa ngakho isiRussia. Izisebenzi zokuzijabulisa, njengoba izivakashi zisho, zihlela imibukiso ethakazelisayo futhi ikhuthaza wonke umuntu ukuba ahlanganyele, kodwa angaziboni. Kuyothakazelisa kokubili izingane kanye nabantu abadala. Kweminye, imincintiswano yamageyimu nemidlalo ihlelwe lapha. Abanye - amanzi aerobics, yoga, bocce, volleyball, ukushaya umnsalo nokunye okuningi. Ngakho-ke kule nkathi yeholide lapha ngeke ube nesithukuthezi.
Njengoba sekushiwo ngaphambili, ihhotela linezitolo eziningana. Izivakashi eziningi zitshela ekubuyekezweni kwazo futhi ngazo. Isitolo sokukhumbula, isibonelo, senza kahle kakhulu. Uma ungafuni ukuya kwenye indawo ngezipho ezingakhohlwayo, ungakwazi ukuzithenga lapha.
Okufanayo kuya esitolo. Kukhona konke okuvela emafutheni omnqumo kuya ensikeni. Futhi amanani awagcini, kepha njengendlela emgwaqweni.
Ihotela livimba izivakashi eziningi nezingane. Ngakho abantu abakhetha iholidi elithule futhi eliphumuzayo, ekuphakameni kwesizini lapha ukuya khona akukhuthazwa. Kodwa lapha ebusika kuhle kakhulu lapha. Awekho izinhlelo zokuzijabulisa ezijabulisayo nezivakashi zesigaba esishiwo ngaphambilini. Kodwa isimo sezulu siyamukeleka. Akunakukhetha kakhulu isimo sezulu abantu abageza ngisho nolwandle. Kodwa-ke, izinga lokushisa lokujwayelekile lapha emini liyi-15-20 degrees (kokubili umoya kanye namanzi). Futhi isimo esisekupheleni kwekwindla nobusika eCyprus sibusa ngokumangalisayo. Ngakho uma kukhona ithuba, khona-ke ukuvakasha kwakho kumele kusetshenziswe lapha.
Ubani isebenzisa owayo izingane zethu nemicabango yokuzibulala?